Badhanka ugu Wanaagsan ee Wadaag Bulsheedka loogu talagalay WordPress | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 13, 2014 Douglas Karr
Dhowr toddobaad ka hor, qof ka mid ah shabakaddayda Facebook ayaa waydiiyay waxa ugu fiican ee badhanka wadaagista bulshada ay ka jiraan WordPress. Waxaan jeclaa fududaan ee Daabacaada JetPack iyo xaqiiqda ah in ay soo saareen barnaamijyada Automattic (horumariyayaasha WordPress); si kastaba ha noqotee, ama habeynta martigaliyahayga ama mid ka mid ah qalabka wax lagu beddelo ayaa ka dhigtay soo-wadaagga soo-saarista mid aan waxtar lahayn (mahadsanid Michael Stelzner tilmaamida taas!). Weli waxaan u adeegsanayaa sheyga si aan ugu riixo waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada, laakiin kama faa'iideysanayo badhamada wadaagista ee bogga.
Waxaan sidoo kale isticmaali jirnay Feejignaan olol ah taas oo ahayd wax la yaab leh. Si kastaba ha noqotee, shirkaddu waxay ka tagtay qalabka wax lagu beddelo waxayna hadda iibineysaa badhamadooda saamiga bulshada sida rukunka. Adeeggu sidiisaba umuu shaqeyn oo waxaan ku sii dhexjiray arrimo sii kordhayay sidaa darteed waan iska daayay isaga iyo wixii ku xirnaa. Aad ayuu u xumaa tan iyo markii mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyni ay ahayd inaan heli karo wadarta saamiyada wixii qoraal ah waxaanan soo saaray lambar si aan ugu dhajiyo meelo kale oo ka mid ah shaxanka si aan ugu qanciyo dad badan inay wax akhriyaan.
Marka, ugaadhsiga ayaa loogu talagalay kumbuyuutar weyn oo WordPress ah oo bixin doona badhanka badhanka la hagaajin karo iyo xulashada xulashooyinka. Waxaan sameeyay aqrin badan iyo tijaabinta daraasiin plugins iyo alaab waxayna wicitaankeedu kudhamaaday iibsiga Badhannada Wadaag Bulshada ee Fudud ee WordPress.
Fidinta ma aha ugu fudud si loo dejiyo loona habeeyo, laakiin saaxirka gudaha waa mid fudud oo xulashooyinka horumarsan waa kuwo badan, oo ay ku jiraan aaladda la socoshada bulshada iyo xitaa qaar ka mid ah falanqaynta wadaag.
Waxaan ku soo daray xiriiriyeheena xiriirka ee boostadan - soo dejiso Badhannada Wadaag Bulshada ee Fudud ee WordPress oo akhristayaashaadu ha ku dhiirrigeliyaan!
Tags: badhanka facebookbadhanka google +badhanka bulshadabadhanka bulshada wordpress pluginbadhamada bulshadabadhamada wadaag wadaagga bulshada ee badhanka badhanka wadaag bulsheed ee ugu wanaagsan badhamada wadaag wadaaggacabir wadaagga bulshadawadaag wadaag wordpress pluginbadhanka twitterkaplugin WordPress